Mhando dzebhizinesi muecommerce | ECommerce nhau
Mabhizinesi mamodheru muecommerce
Munguva pfupi yapfuura, iyo Ecommerce Foundation yakaparura mushumo unonzi "Spain Ecommerce Report" uyo unoratidza kuti kuchave nekubuditswa kwemari inosvika mamirioni makumi maviri nemasere emamiriyoni muSpain yegore rino maererano nekutengeserana kwemagetsi. Asi usati watanga rwendo rwekutengeserana nedhijitari, zvinonyanya kukosha kuti utsanangure modhi yebhizinesi raunoda kuita.
Icho chidimbu chakachinjika chakadai icho chinogona kufukidza mitsara yakasiyana yebhizinesi, kunyangwe kubva pamafomati ane hunyanzvi. Kuti uite sarudzo iyi unofanirwa kuzvibvunza kuti ndeapi akanakisa zvikamu zvebhizimusi kwaunogona kushanda. Zvichienderana nehunyanzvi hwawakawana kusvika parizvino, iwe uchave unokwanisa kutsvaga mikana yako munyika yebhizinesi redhijitari.
Chero zvazvingaitika, zano rinenge richinyanya kubatsira kubva ikozvino kusarudza madhijitari ebhizinesi niches ane ramangwana tarisiro. Nesimba rekukura iro rinokubatsira iwe kufambira mberi gore gore. Chero zvazvingaitika, sarudzo ichagara iri yako, asi inofanirwa kuitiswa kubva kune ruzivo uye ongororo inova ndiyo inonyanya kukosha kuita mukutengesa zvemagetsi.
1 Ecommerce Bhizinesi Models: Ongorora Unyanzvi Hwako Hwehunyanzvi
2 Zvitoro zvepaindaneti zvezvikamu zvekushanya
3 Mabhizinesi mamodheru anoenderana nekutengeserana
4 eCommerce yezvigadzirwa zvemadhijitari
5 Mukati zvinoenderana neshanduro yezvinyorwa uye zvinyorwa
6 Shanduko-kune-Shanduko (E2E)
7 Makiyi ekubudirira kana uchiita bhizinesi redhijitari
Ecommerce Bhizinesi Models: Ongorora Unyanzvi Hwako Hwehunyanzvi
Kubva pane yakajairika nzira, hapana mubvunzo kuti iwe uchave uine akati wandei sarudzo yekutanga imwe mhando yebhizimusi bhizinesi. Iwe unoda kuziva here mamwe mazano kuti ugadzire yakakodzera purojekiti yedhijitari? Zvakanaka, isu tichaenda kukupa iwe imwe bhizimusi chikumbiro icho chichava chokwadi kushamisika nekutanga kwayo kukuru. Semuenzaniso, kuburikidza neanotevera ecommerce bhizinesi mamodheru isu atinokufumura iwe pazasi:
Ehezve, nzira yakachengeteka kwazvo yekudzivisa kuita zvikanganiso mudhijitari chirongwa chako kushandisa iri nyore zano rekuita kubva zvino zvichienda mberi. Hazvishamisi kuti yakafara ruzivo rwemusika ndiyo pasipoti yakanakisa yekuzadzisa zvinangwa zvako ipapo.
Neiyi nzira, kana iwe wakabatanidzwa kune zvemitambo zviitiko kubva pakutanga kwazvo, zvese zvehunyanzvi uye kubva kune yekuona nzvimbo yekutarisa, une huwandu hwakawanda hwemikana yekutora kuInternet. Imwe yeakanyanya kukosha kutengeswa kwe mbatya dzekumhanya (T-shirts, sweatshirts, tracksuit, sneakers, nezvimwewo).
Iyo data inotsigira iyi sarudzo kana zvikawanikwa kuti vashandisi vanoita zvavanotenga mumhando yepamhepo, ivo vanoshanyira emitambo ecommerce domains kanenge katanhatu. Naizvozvo, kana iwe uine hunhu hwekuita iri basa rehunyanzvi, unogona kunge uri iwo mukana wanga uchitsvaga mumwedzi yapfuura. Usakanganwa kuti makambani senge Polar kana Sprinter akatanga kubva pasina uye ikozvino yavo mutero zviuru nezviuru zveeuros euros ese.
Zvitoro zvepaindaneti zvezvikamu zvekushanya
Mukati meiri zano rimwe rakanangana nekumutsa hunyanzvi hwevanamuzvinabhizimusi, chikamu chine chikuru chiripo neramangwana senge kushanya hakukanganwike. Izvo zvakaringana kurangarira kuti Gross Domestic Chigadzirwa (GDP) yeiyi indasitiri inomiririra 10,4% yenyika GDP, maererano nemushumo wapagore weWorld Travel and Tourism Council (WTTC). Chikonzero chakanaka chekufarira chiitiko ichi chiripo mumakondinendi mashanu epasi.
ari kuchinja mutsika nevashandisi uye kutaridzika kwetekinoroji nyowani zvakakonzera kuvhurwa kwemitsara mitsva yebhizinesi ine kurudziro yakakosha. Ehezve, ivo havafanirwe kuve vanobatanidzwa kune yekugara kana chikamu chehotera. Asi hongu nechimwe chiitiko chakakosha, senge makambani edhijitari akabatanidzwa nezororo, dudziro, kana zvimwe zvigadzirwa zvekushanya. Iko kwaunenge uine mukana wakakura wekukura kwepakati nepakati refu.
Iko kwauchazodikanwa a kudzidza muhupenyu hwako hwebasa. Kufanana neiyo yakagadzirwa mumasangano ekufambisa, nzvimbo dzekuzorora kana makambani evaraidzo. Iwo masevhisi anodikanwa zvakanyanya nevashanyi vatsva uye izvo saka zvinogona kukupa iwe mukana unobatsira kwazvo webhizinesi rako kubva zvino zvichienda mberi. Kusvika padanho rekuti rondedzero yazvino yeGlobal Dhijitari Yekufamba Mapuratifomu inoratidza pachena kuti kutengesa kwekufambisa pamhepo kuchawedzera kusvika pa40% pakati pa2017 na2021.
Mabhizinesi mamodheru anoenderana nekutengeserana
Kana isu tikanamatira kune iyi inosarudzika nzira, hapana mubvunzo kuti imwe nzira inochinja kuburikidza nepfungwa inozivikanwa se "bhizinesi kune bhizinesi". Iyo inozivikanwa zvakare seB2B mukujeka kwakakodzera kune epuratifomu mapuratifomu pakati pevanhu. Izvo zvese ndezve tora mukana wekushambadzira kuyerera kuburikidza neInternet. Kana mune mamwe mazwi, yakasarudzika chiteshi yekutora chikamu kwemakambani, makambani uye mamwe emagariro kana ehupfumi vamiririri.
Pasina kupokana, iri yakaoma bhizinesi modhi kupfuura iyo yese. Asi panguva imwechete nesimba rakakura rekukura mumakore anouya. Aya ndiwo matangiro akaita Alibaba uye iwe unogona kutoona kuti shanduko yaro yave iri kubva 2015. Unogona kuteedzera aya marudzi emakambani, zvisinei nekutengesa kudiki-dhijitari. Mauri iwe pachezvako unosarudza vezvemagariro vanoumba aya maratidziro: vatengi, vanhu vamwe nevamwe kana vamwe vatengesi.
eCommerce yezvigadzirwa zvemadhijitari
Ichi ndicho chimwe chezvitoro zvemadhijitari zvinoda mari shoma yekuenda. Asi nekuratidzira kune simba kwazvo kune anotevera. Kune rimwe divi, iwe une akasiyana mamodheru aunosarudza kubva:
Iwe uchafanirwa kuzvigadzirisa zvinoenderana nezvaunoda uye kunyanya iro danho reruzivo rweaya mabhizimusi niches.
Funga izvozvo Netflix, semuenzaniso nyika iri pasi peiyi zano mukutengesa kwezvinhu zvemadhijitari. Unogona kuvatevedzera kunyangwe iwe usiri kubudirira sevashandi vepamusoro-tier. Nezvakanakira kuti icho chigadzirwa chiri kuwedzera kudiwa nevashandisi vatsva, kunyanya avo vanobva kuchikamu chidiki chemagariro.
Mukati zvinoenderana neshanduro yezvinyorwa uye zvinyorwa
Ichi ndicho chimwe chebasa rinonyanya kudiwa munyika inozivikanwa nekudyidzana kwepasi rose. Asi iwe unogona kuenda zvakatowedzera uye ukasagutsikana ndiyo mitauro yakajairika pasi rose (Chirungu, ChiFrench, ChiGerman, Chiitaliya, ChiSpanish, nezvimwewo). Asi pane kudaro, iwe unogona kusimbisa mu lexicon yenyika dziri kubuda vane huwandu hwehuwandu hwevanhu. Semuenzaniso, China, India, Russia kana maasia tiger ehupfumi.
Uye zvakare, ichave iri chaiyo yepakutanga uye nzira itsva yekuwedzera kune dzimwe nzvimbo dzenzvimbo. Pasina kubatanidza chero yekuwedzera kuyedza pane yako chikamu. Kunyangwe kune rimwe divi, iwe unenge usina sarudzo kunze kwekutendeukira kune vanobatsirana zvakanyanya kunyanya kusarudzika kupfuura mune zvimwe zvakawandisa zvemukati.
Iyi e-commerce modhi iri kunyatso kuwedzera uye inonyanya kuratidzwa neinonzi kubatana kwemagetsi. Ndokunge, hautengese zvinyorwa kana zvinhu zvemidziyo, asi zvinopesana iwe unopa ruzivo rwakakosha kwazvo. Muenzaniso wakajeka weiyi maitiro ndiyo inomiririrwa nemisika yemari.
Panguva iyo varimi vadiki nepakati varimi vanoda ruzivo rwakawanda ku ita sarudzo dzako mune yekudyara uye mari chikamu. Iko mari yakawanda iri panjodzi kuburikidza nekutengesa pamusika wemasheya uye mimwe misika yemari.
Makiyi ekubudirira kana uchiita bhizinesi redhijitari
Mune chero ipi yeiyi mienzaniso yatakataridza kwauri, pane nhungamiro yezviito zvaunofanira kutevedzera kana uchida kuzadzisa bhizinesi rako. Semuenzaniso iwo atinofumura pazasi:
Gadzira chigadzirwa chitsva
Kuitwa kwaro mukutengesa zvemagetsi hakusi kusahadzika. Uye kana iwe usinga zive maitiro ekuvandudza iyo pfungwa, iwe uchagara uine zviwanikwa zvekuvandudza kana kukumbira a misika yekudzidza nechinangwa chekutanga chekuziva kana chichigona kushanda.
Kuwana kune zvinodiwa nevatengi
Kubatsira kwakanaka kwevatengi inzira iri kuramba ichidikanwa pakati pevashandisi vari muchikamu ichi. Mupfungwa iyi, mhinduro yeiyo chaizvo na vape ivo yakanakisa nzira dzekutaurirana yenguva yacho: blog, email kana kunyange dhizaini yemukati chat kuitira kuti vatengi vagadzirise kusahadzika kwavo kwese, kusanganisira zviitiko zvehunyanzvi. Iwe uchaona kuti mune pfupi sei nzvimbo yenguva mhedzisiro mukubhadharisa kwako ichave ichishamisa chaizvo. Iwe haugone kupfuudza chiitiko ichi kuchengetedza ichi chakakosha chikamu chemagetsi kutengeserana.
Ipa chengetedzo kune yekutengesa webhusaiti
Kana iwe usina nzvimbo dzakachengeteka, zorora kuti hauzove nekutengesa kwakawanda. Kugadzirisa chiitiko ichi, une maturusi akati wandei ekuti uzviite pamwe nekubudirira, pakati pazvo pane zvinotevera:
SSL chitupa (yakachengeteka soketi rukoko).
Nzira dzekubhadhara dzakachengeteka (kuendesa, kiredhiti kana makadhi ekubhengi kana kubhadhara kwemagetsi).
Mamwe masisitimu mune encryption kuitira kuti data yemutengi isakwanise kupfuudzwa kune wechitatu mapato.
Nenzira iyi, iwe chete ndiwe unozokwanisa kuwana ruzivo urwu nezve vatengi vako. Nekuvimba kunotevera kune chikamu cheizvi uye izvo zvinokanganisa kufambira mberi kwakanaka kwebhizinesi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Mabhizinesi mamodheru muecommerce
Musiyano uripo pakati ecommerce neMusika